Now you could complain directly to the UNHCR HQ မိမိတို့ရဲ့ နစ်နာမှုများကို UNHCR HQ သို့ တိုက်ရိုက် တင်ပြ အကူအညီ တောင်းခံနိုင် | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeNow you could complain directly to the UNHCR HQ မိမိတို့ရဲ့ နစ်နာမှုများကို UNHCR HQ သို့ တိုက်ရိုက် တင်ပြ အကူအညီ တောင်းခံနိုင်
Now you could complain directly to the UNHCR HQ မိမိတို့ရဲ့ နစ်နာမှုများကို UNHCR HQ သို့ တိုက်ရိုက် တင်ပြ အကူအညီ တောင်းခံနိုင်
အထက်ပါ Link ဟာ
UNHCR သို့ တိုက်ရိုက် တင်ပြ တိုင်တန်းနိုင်သည့် Link ဖြစ်ပါတယ်…
မိမိတို့ရဲ့ နစ်နာမှုများကို UNHCR Headquarter သို့ တိုက်ရိုက် တင်ပြ အကူအညီ တောင်းခံနိုင်ပါသည်…..
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးခြင်းနစ်နာ ဆုံးရှုံးမှု…များအတွက် ရေးသားတင်ပြကြပါ…
အထူးသဖြင့် Malaysia UNHCR မှ မြန်မာမွတ်စလင်များအပေါ်
ခွဲခြားဆက်ဆံနေမှုများ….
After sending…you will get this…
ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရန် ငြင်းဆန်နေမှုများ….
UNHCRကဒ်ပြားများပြန်လည် သိမ်းဆည်းနေမှုများ…..
တတိယနိုင်ငံထွက်ခွာမှုများ ကြန့်ကြာနေခြင်းများ…….
…..အစရှိသဖြင့်…မိမိတင်ပြ တိုင်တန်းလိုသည်များကို ရေးသားပေးပို့
လိုရင်းကို တိုတိုနှင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးသားတင်ပြကြပါ
နားလည် တတ်ကျွမ်းသူများ၏ အကူအညီ ကိုရယူ၍ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ
အခက်အခဲရှိပါက….မြန်မာဘာသာဖြင့်လည်းရေးသား ပေးပို့ နိုင်ပါသည်
( ရေးသားထားသမျှကို နားလည်အောင် လုပ်ရမည်မှာ UNHCR ၏ အလုပ်
ကျေးဇူးပြု၍ အဆင့်ဆင့် …ဖြန့်ဝေ အသိပေးကြပါရန်….
ကျနော်တို့လည်း နည်းလမ်းရှိသ၍ ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပါသည်…
မိတ်ဆွေ…ကာယကံရှင်များမှလည်း…ဝိုင်းဝန်းပါဝင်ပေးကြပါ…
Yes…We Myanmar Muslims must pray (Doa”) to Allah swt. As the saying goes…We need to tie the camel while pray to Allah.
Although Myanmar Muslim elders like Maung Maung, I and others are trying for the sake of ALL THE MYANMAR MUSLIMS here in Malaysia, you should not just rely on the midwife only…you need to squeeze or put in some efforts.
Maung Maung translated for me. TQ
1/ UNHCR က ကျွန်တော့ကို အကာ အကွယ်/ စောင့်ရှောက်မှု မပေးပါဘူး….ဆိုတဲ့အဓိပါယ်ပါ
(UNHCR-Malaysia refused to give protection to Myanmar Muslims…)…ဒီစာပိုဒ်ကို ကူးယူပြီး ဖြည့်နိုင်ပါတယ်….
2/ UNHCR က မြန်မာမွတ်စလင်များကို ဒုက္ခသည်ကဒ် ထုတ်ပေးခြင်းမရှိပါဘူး…. ဆိုတာအတွက်…
(UNHCR-Malaysia refused to issue UNHCR Cards to Myanmar Muslims…) ကို…ကူးယူပါ…
3/ ကျနော်တို့ရဲ့ ကဒ်တွေကို ဖျက်သိမ်းပစ်ပါတယ်-ပြန်သိမ်းသွားပါတယ်- အသိအမှန်မပြုတော့ပါဘူး…ဆိုတဲ့ အဓိပါယ်အတွက်…
(UNHCR-Malaysia cancelled (or) took back (or) reject our UNHCR Cards from Myanmar Muslims.)..ကို ကူးယူပါ..
4/ ကျနော်တို့ရဲ့ ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု စစ်ဆေးခြင်းတွေကို ငြင်းဆိုနေ ပါတယ်…..ဆိုတာအတွက်….
(UNHCR-Malaysia cancelled (or) took back (or) reject our UNHCR Cards from Myanmar Muslims.)..ကို ကူးထည့်ပါ..
5/ ကျနော်တို့ အား တတိယနိုင်ငံပို့ဆောင်ပေးခြင်အစီအစဉ် များကို ရပ်ဆိုင်း ထားပါသည်…ဆိုတာအတွက်…
(UNHCR-Malaysia refused to (proceed to) process RST for Myanmar Muslims)…ကို ကူး ဖြည့်ပါ..
6/ မလေးရှား ယူအဲန်အိတ်ခ်ျစီအာရ်က မြန်မာမွတ်စလင်တွေကို တတိယနိုင်ငံသို့ ပိုဆောင်ပေးခြင်းမပြု ပါဘူး…ဆိုတာအတွက်….
(UNHCR-Malaysia failed to send Myanmar Muslims to 3rd. countries.)…ကို ကူးဖြည့်ပါ…
7/ မလေးရှားယူအဲန်အိတ်ခ်ျစီအာရ် က မြန်မာမွတ်စလင် တွေကို ပြန်လည်အခြေချခွင့် မပြုပါဘူး….ဆိုတာအတွက်….
( UNHCR-Malaysia failed to send Myanmar Muslims for resettlement.…)..ကို ကူးယူပါ…
8/ မြန်မာမွတ်စလင်တွေကို တတိယနိုင်ငံသို့အခြေချနိုင်ရေးအတွက်….လဝက ဖြေဆိုပြီး….ကျန်းမာရေးဆေးစစ်ပြီး….ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသူများကိုပင်….အချိန်ဆွဲထားခြင်း…အဆက်အသွယ်မလုပ်ခြင်း……ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ ခြင်း….အတွက်…
(UNHCR-Malaysia failed to send Myanmar Muslims for resettlement even after Medical Check-up or even after briefing classes or even after chosen the country or even after vaccination….etc.)…..ကို ကူးယူပြီးဖြည့်ပါ….
← တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင် ဘာလုပ်ရမလဲ? လီကွမ်းယု မဟာသီယာ… တောင်ကိုရီးယား ဂျပန်က ဒုကမ္ဘာစစ်အပီး ဘာတွေ လုပ်ခဲ့လဲ လေ့လာ
Myanmar’s ancient fiction of 101 Lumyo or Races →
One thought on “Now you could complain directly to the UNHCR HQ မိမိတို့ရဲ့ နစ်နာမှုများကို UNHCR HQ သို့ တိုက်ရိုက် တင်ပြ အကူအညီ တောင်းခံနိုင်”
I got the reply…no-reply@unhcr.org via unicc.org
2:36 PM (3 hours ago)
The following was submitted via the UNHCR Website
Concerning: Individual Cases
Ms. Yanghee Lee will visit Myanmar but she may conveniently ignore the Meiktila Myanmar Muslim refugee camps and sufferings of MYANMAR MUSLIMS ..This is the usual habit of UN, UNSC, UNGA, UNHCR, UNHCR-Malaysiaalthough International Media, Human Rights Watch, Genocide Watch, Amnesty International, USCIRF’s Annual Reports, Fortifi Rights etc reporting the Atrocities, discriminations, restriction of religious activities and up to mass murders on MYANMAR MUSLIMS by successive Bama Buddhist Military governments and continue up to DASSK’s NLD Government.
First name: Dr Ko Ko
Last name: Gyi
Phone: 03-XXX (Clinic office hours)
Address: No XXXJl XXX Tmn XXX
Zip / Postal code: XXX00
Network Address: XXX.100.30.XXX